राष्ट्र बैंकले खरिद गरेकाे १ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर कहाँ छ? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
राष्ट्र बैंकले खरिद गरेकाे १ अर्ब ९२ करोड अमेरिकी डलर कहाँ छ?
दीपक भट्ट काठमाडौं फागुन २
सर्वसाधारणले डलर प्राप्तिका लागि कठिनाइ भाेगिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले पछिल्लाे छ महिनामा १ अर्ब ९२ कराेड अमेरिकी डलर खरिद गरी विभिन्न च्यानलमार्फत बजारमा पठाएकाे जनाएकाे छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलाे ६ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ९२ करोड खुद खरिद गरेको थियो। तरलता प्रभाव पार्न भन्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त डलर खरिद गरेकाे थियो।
त्यसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड बाराबरको डलर विभिन्न च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरेकाे छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. २३ अर्ब ५८ करोड बराबरको डलर स्थायी तरलता सुविधा उपयोगको लागि लगेकाे केन्द्रीय बैंकले जनाएकाे छ। त्याे डलर अहिले बजारमा छ।
डलर चाहने सर्वसाधारणले कमर्सियल बैंक वा सटही सेवा प्रदायकबाट डलर लिँदै अाएका छन्। ६ महिने समीक्षा अवधिमा खुला बजार कारोबारमार्फत् कुल रु. ६९ अर्ब ३३ करोड तरलता प्रवाह भएकाे केन्द्रीय बैंकले अाैंल्याएकाे छ। बैंकहरूले डलर अभाव देखाउँदै सर्वसाधारणलाइ सटही सुविधामा कञ्जुस्याइँ गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंककाे यस्ताे अाँकडा सार्वजनिक गरेकाे हाे।
यस क्रममा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको १४ दिने रिपो बोल कबोलमार्फत् रु. ४४ अर्ब ५ करोड र सोझै खरिद बोलकबोलमार्फत् रु. २५ अर्ब २८ करोड तरलता प्रवाह गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रु. १५ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह भएको थियो।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब ४ करोड खुद खरिद भई रु. २१९ अर्ब ३५ करोड खुद तरलता प्रवाह भएकोे थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ६ महिनासम्ममा खुलाबजार कारोबारका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी रु. १२९ अर्ब २० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ।
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब २० करोड र यूरो ४ करोड बिक्री गरी रु. २३१ अर्ब ६४ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको समेत नेपाल राष्ट्र बैकले साेमबार जारी गरेकाे ६ महिने समीक्षामा उल्लेख छ।
प्रकाशित २ फागुन २०७४, बुधबार | 2018-02-14 07:48:45